Ny kaody loharano mankany jailbreak iOS 8.4.1, misy | Vaovao IPhone
Rehefa avy nandefa bitsika sasany mifandraika amin'ny jailbreak ho an'ny kinova farany an'ny iOS 8, mpianatra italiana iray no anarany Luca todesco dia namoaka ny loharano loharano izay manome vahaolana hanaovana ny jailbreak mankany amin'ny iOS 8.4.1. Ity vahaolana jailbreak ity dia antsoina hoe Yalu ary ho hita mandritra ny fotoana fohy alohan'ny famoahana fitaovana jailbreak iray manontolo.
Kaody loharano Yalu Azo alaina ao GitHub ary, araka ny ahitanao raha miditra amin'ilay rohy ianao, ny lahatsoratra «jailbreak ho an'ny iOS 8.4.1 tsy feno, nataon'i Kim Jong Cracks«, Izay manazava tsara ny satan'ilay fitaovana ary mamono ny fanantenan'ny mpampiasa sasany noterena hanavao ny iOS 8.4.1 ary manantena jailbreak amin'izao fotoana izao ho an'ny iPhone, iPod na iPad azy ireo, fa aza kivy.
Misy ny tag "tsy feno" satria ny kaody loharano ho an'ity jailbreak ity dia an'ny a fitaovana voafehy, izay midika fa raha vonointsika ilay fitaovana dia mila solo-saina handrehitra azy io indray isika. Raha te-hanamboatra azy io dia mila ny fanampian'ny mpamorona iray hafa (izay nanomana azy) ary izany no antony tsy namoahan'ny Todesco izany.
Hanangana a ny developer Italiana mora ampiasaina fitaovana ho an'ny besinimaro, zavatra izay tsy nambarany mazava nefa nataony mazava tsara. Todesco nandefa bitsika iray nilaza hoe «Raha lazaina ara-teknika, ny iPhone 6-ko dia tapaka amin'ny iOS 8.4.1 izao. Yulu ho an'ny i6 dia tena pro bento ».
iOS 9 dia manome olana maro amin'ireo mpampiasa. Raha ampianay an'ity vaovao ity ity ary tianao ny jailbreak iOS 9, dia tsara kokoa raha manam-paharetana ianao ary azo inoana fa ho afaka jailbreak iOS 8.4.1 ianao amin'ny ho avy tsy lavitra. Tsy vita sonia intsony ilay kinova, ka raha mila mamerina ianao dia tsara ny manao azy amin'ny fitaovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Ny kaody loharano mankany amin'ny jailbreak iOS 8.4.1, misy izao
23kie dia hoy izy:
Inona ny vaovao mahafinaritra, manana fanontaniana aho satria hoy ny lahatsoratra raha mamerina amin'ny findainao ihany ianao dia mampakatra ny kinova iOS sa tsia? Misaotra anao aho manantena fa afaka manampy ahy ianao
Valio amin'i 23kie
andr1u dia hoy izy:
23kie, nieritreritra foana aho fa hanery ny hiakatra ilay kinova, saingy tokony ho 2 volana lasa izay dia nataoko tamin'ny iPhone 4S misy 7.1.2 izany ary vitako ny mitazona azy !! Midika izany fa mitazona ny firmware ho fahatsiarovana hahafahana mamerina tsy misy iTunes!
Mamaly an'i andr1u
Oleeee izay mpiara-mitory vaovao mahafinaritra, na dia mieritreritra aza aho fa tonga ny olana fa raha vao manao ny fonja ianao raha miverina am-ponja dia tsy mamela anao hiala amin'ny finday mitovy ve izany ??? Na manome lesoka (voalaza hatrany ao amin'ny The Progress of the restauration) Tiako raha misy olona manamafy izany amin'ny fisaorana rehetra
Salama 23kie. Cydia Impactor dia efa nisy hatry ny ela ary ny zavatra ataony dia ny famerenana amin'ny laoniny ilay fitaovana mankany amin'ilay kinova mitovy ary tsy misy hadisoana na hadisoana.
tsara izany!!! Misaotra betsaka fa inona no mahatonga ity pejy ity ho vondrom-piarahamonina mahafinaritra, mpiara-miasa ary manampy amin'ny zavatra rehetra ianao, tsy isalasalana fa iPhone no iray amin'ireo pejy tsara indrindra misy, misaotra anao rehetra !!!
PS: Faly be aho aminareo rehetra, na mpiara-miasa na mpitoraka bilaogy amin'ny Internet, manao asa tsy resy ianao
Dibie dia hoy izy:
Ny ipad amin'izy ireo dia ipad 4 mini novidiako tany Chine dia mitondra ny iOS 7.0 Tiako halefa amin'ny ioas 8.4.1 satria amin'ity iray teo aloha ity ny aplestore dia azoko amin'ny taratasy sinoa ary tena tsy azoko mihitsy, Ovaiko ho amin'ny kinova 8.4.1 Mamaha ny olana aho
Mamaly an'i Dibie
Ahoana ny fomba fanesorana ireo fanamarinana faka amin'ny iPhone na iPad anao